ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ၏ သဘောထားကြေညာချက် | အတ္တကင်းစင် ဒီမိုကရေစီ လွင်ပြင်
ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ၏ သဘောထားကြေညာချက်
လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် ပြည်တွင်းစစ် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခ၊ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် စသည့် နိုင်ငံ့ရေးရာ ပြဿနာ ရပ်များအတွက် အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေး နှင့် အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးတွင် ပင်လုံစိတ်ဓါတ်နှင့်ပြည်ထောင်စုအရေး၊တိုင်းရင်းသား အရေး နှင့် မီဒီယာများ၏ အခန်း ကဏ္ဌ သည် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
လက်ရှိ အစိုးရအနေဖြင့်ဌင်းတို့ကြွေးကြော်နေသည့် ” ခေတ်မှီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်သစ် ” တရပ်ပေါ်ထွန်းလာရန်နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၊ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် တချို့ဥပဒေများကိုခြွင်းချက်ဖြင့်ကန့်သတ်မှုမူဘောင်အတွင်းမှလျှော့ချပေးလာသည်ကို မြင်တွေ့သိရှိရပါသော်ငြားလည်းဘဲ KIO , KIA ကချင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များမှတောင်းဆိုနေသည့်ငြိမ်းချမ်းရေး၊အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေး ကိုလစ်လျှုရှုကာစစ်တပ်မှယနေ့အထိဆက်တိုက်ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်း၊မုံရွာဒေသခံများဆန္ဒပြထိန်းသိမ်းခံတိုက်ပွဲဝင်တောင်းဆိုနေသည့်လက်ပံတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်မည်ဟုကြေငြာခြင်းစသည့်လူ့အခွင်းအရေး ချိုးဖောက်မှုများကိုဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် မြန်မာ့ လွတ်လပ်မှုအဆင့်သည် နိုင်ငံတကာ စံချိန်းစံညွန်း အားဖြင့် ဆိုလျှင် လွတ်လပ်မှု မရှိသည့် စာရင်းတွင် နောက်ဆုံးကပင် ကပ်လျက် ရှိနေသေးပါသည်။
ထို့ကြောင့် ပြည်တွင်း ပြည်ပ ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ သားများအနေဖြင့် သွေးစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသည့် လွတ် လပ်သော လူ့ဘောင်တရပ် ပေါ်ထွန်းလာစေရေးအတွက် အတူတကွ ယှဉ်တွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ဤနေရာမှအောက်ဖော်ပြပါအချက်များကိုတောင်းဆို အပ်ပါသည်။
2. တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့၏အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးသဘောတူညီချက်များကိုလေး စားလိုက်နာပြီးပြည်တွင်းစစ်မီးအပြီးငြိမ်းသတ်ပေးရန်
ပြည်ပရောက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
What is the present climate to such rebellious armed conflict in Civil War, Home Rule and Federalism as National Federation along with Pinlon patriotic spirit, freedom of Press to Media in Burma plays the important role in National reconciliation and forever peaceful coexistence among all the national ethnics.
Even though what the present pro-military regime publicized “Towards the modern and development Democracy Nation” releases some of the tension to rules and regulation in an effort to materialize the political and economic reforms has still been seen as within-framework, this notorious regime ignores the call of peace and cease fire by KIO and KIA, Kachin Arm Forces, and keeps fire on KIO and KIA, even declares to continue the implement of Letpandaung Copper mine project objected through the demonstration and the detainee by Monywa regional residents. Thus it commits Human Right as yet seen.
Moreover, it is as usual seen and considered as the last-primitive-and-uncivilized country next to the end of lists in the standard of being Equality and Human right by international norms and mores. That is why; to emerge the best society through transparency and unity by Burmese domestic, oversea and abroad, there proclaimsademand for the reality as following:
1. To cease fire on Civil War to KIA and KIO in Kachin State
2. To follow the agreement on ceasing fire and peace both the regime and the ethnic armed forces and come to an end totally to Civil War in Burma
3. To stop being implemented Letpandaung Copper mine Project at Monywa region
4. To release all the detainees and political activists even the rest of the political prisoners in Jails without any exception
5. To practice the Principle of Democracy through transparency and crystal in international norms and mores
Oversea 88’s Student Generation
Posted by wanna23 at 04:42